လူထုခေါင်းဆောင် နဲ့ မီးမလာ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လူထုခေါင်းဆောင် နဲ့ မီးမလာ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပွဲ
လူထုခေါင်းဆောင် နဲ့ မီးမလာ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပွဲ
Posted by လင်းဝေ on May 23, 2012 in Creative Writing, Think Different | 30 comments
မီမလာ ရေမလာ ခေါင်းဆောင်မှုမလာ
မြန်မာလူထုကြီးမှာ လူထု ခေါင်းဆောင် ရှိတယ်။ ( မရှိဘူး ဆိုရင် လည်း မရှိကြောင်း ပြောနိုင်ပါတယ် )
လူထုခေါင်းဆောင် ဆိုတာ လူထုကို မှန်ကန် သင့်လျော်ရာကို ဦးဆောင်လမ်းပြပြီး ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ ပြုမူမှုကို ညွှန်ပြတဲ့သူဖြစ်တယ်။ လူထုအကြိုက် လူကြိုက်များတာ မဟုတ်လည်း လူထုကို မှန်တာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတယ်။
မီးတွေပျက်တယ်။ မီးမလာဘူး။ လာတဲ့အချိန်တောင် မှန်အောင်မလားဘူး။ အိပ်ရေးကပျက်။ ညကြီးထပြီး မီးပြောင်းရတယ်။ အင်ဗာတာ အားသွင်းရတယ်၊ ရေတင်ရတယ်၊ ရေချူရတယ်၊ မီးလာတုန်း ဖုန်းအားသွင်းဖို့ သတိထားရတယ်။ ညကြီးမင်းကြီး စိတ်တိုလိုက်တာဆိုတာ စိတ်ထဲ ရှိရှိသမျှ အပြင်းအထန်ဆုံးစကားလုံးတွေနဲ့ အတင်းမာဆုံးလေသံကို သုံးပြီး လျှပ်စစ်ဌာန ကိုဖုန်းဆက်ပြီး မင်းတို့ သောက်ရှက်နည်းနည်းမှ မရှိဘူးလား။ မီးမပေးနိုင်ရင် အခုချက်ချင်း အလုပ်ထွက်လိုက်ပါလား ဘာညာ ဆဲမယ် စိတ်ကူးပြီး စိတ်ကူးတွေကို ပြန်မျိုချမိတယ်။ ဟိုးတုန်းက အမြဲလိုလို လှမ်းဆဲပါတယ် မဆဲတဲ့အခါ လှမ်းကြပ်ပါတယ်။ ခဏနေရင် မီးပြန်ပေးပါ့မယ် ပြောရင် ခဏဆိုတာ ဘယ်လောက်တုန်း မေးမယ်။ အသေအချာတော့ မပြောနိုင်ဘူးဆိုရင် ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ် သေချာမသိဘူးလားကစပြီး ကြပ်နည်းပေါင်းစုံ ရစ်နည်းပေါင်းစုံနဲ့ ဆက်မွှေပါမယ်။ အားရတော့မှ မင်းတို့ အချိုးပြင်ပါပြောရင် လျှပ်စစ်ရုံးက ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ဖြစ် ဘာမှ မပြောပဲဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းချသွားမယ်။ နောက်တော့လည်း ကိုယ် သူတို့ကို ကြပ်နေလည်း ဘာမှကို မထူးဘူး ဆိုပြီး သနားတဲ့စိတ်နဲ့ အောက်ကလူတွေကို မပြောတော့ပါဘူး။ ရန်ကုန်ကို မီးဘယ်အပိုင်းကို ဖြတ်မယ် ဘယ်အပိုင်းကို မီးပေးမယ် ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်တဲ့ ဌာနကို LCD လို့ခေါ်တယ် Load ဘာဆိုလည်း သူ့အပြည့်အစုံက။ အဲဒီ ဌာနအထိ လှမ်းပြီးကလော်တုတ်ဖူးပါတယ်။ အဲဒီက အင်ဂျင်နီယာ ဆိုတဲ့ကောင်မတွေက ပထမ ဗွီအိုင်ပီ မှတ်ပြီး ကောင်းကောင်းဖြေနေတယ် နောက်တော့ ရစ်ပါများလွန်းလာတော့ သူတို့သိလာပြီး ကိုယ့်ကိုပြန်စွာကြတယ်။ စွာလွန်းလို့ အော်ဟစ်ကြိမ်းမောင်းတော့ ဖုန်းကို ချပစ်ကြတယ်။ ပြောချင်တာက မီးမလာတာ ဘာမှကို လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ အရင်က အမှားကြီးမှားတာတွေအတွက် အခုချက်ချင်း ပြင်လို့ကို မရသေးတာပါ။
လက်ရှိ ဒါတွေ ကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ GEကတာဘိုင်တွေတို့ JP Power က ကျောက်မီးသွေး ဓါတ်အားပေးစက်ရုံတို့၊ အသစ်ထွက်မယ့် လုပ်ကွက်တွေက ဓါတ်ငွေ့နဲ့ တာဘိုင်လည်မှာတို့ပြောနေတာတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီဟာတွေကို ဖိအားပေးပြီး တိတိကျကျ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လွှတ်တော်တွင်းမှာ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးတွေကို တရားဝင်မေးတာ ထောက်တာ လုပ်တာက ပိုပြီးထိရောက်မယ်ထင်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ ၂၀၁၀ တုန်းက ဖျာပုံဘက် ဒေါ်ငြိမ်းရွာဘက်ကနေ သွယ်တန်းလိုက်တဲ့ ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းကြီးကိစ္စ ဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီလဲ။ ဒီပိုက်လိုင်းအတွက် ကုန်ကျစားရိတ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၅၀သန်းလောက်သုံးပြီး မီးမမှန်သေးတာ ဘာဖြစ်လို့လဲ။ အဲဒီအချက်တွေကို မီဒီယာတွေက ရေးသင့်၊ လွှတ်တော်ထဲမှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေက မေးသင့်ပါတယ်။ လွှတ်တော်ရပ်ထားတုန်းဆိုရင်လည်း ဒီကိစ္စကို လူထုခေါင်းဆောင်က လူထုကိုယ်စား မီဒီယာပေါ်ကနေပြီး တရားဝင် ထင်မြင်ချက်၊ မှတ်ချက်ပေးသင့်ပါတယ်။
အခုလို ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်းတာ ကောင်းပါတယ်။ နေ့တိုင်းတော့ ထွန်းမနေနဲ့ပေါ့ဗျာ။ တစ်ရက် နှစ်ရက်ထွန်းပြီး လူသိအောင်လုပ်ပြီးရင်တော့ ရပ်လိုက်ကြပါ။ နောက် ဒီကိစ္စကို မီးလာဖို့ ပြောနေတုန်း ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရမယ် ဆိုတဲ့စာတန်းလေးတွေ ထထောင်တာကလည်း နည်းနည်း ဘောင်ချော်နေသလားလို့။ လုပ်ချင်ရင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဖို့ သီးသန့် လူထုအစည်းအဝေပွဲကြီး ဆော်သြပြီး လုပ်လိုက်ကြပါ။ လူထုခေါင်းဆောင်က ဒီလိုပွဲကြီး လုပ်သင့်တယ်ထင်ရင် လုပ်လိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် လွှတ်တော်တွင်းကပဲပြောမယ် ဆိုရင်လည်း လူထုကို လွှတ်တော်တွင်းမှာ ပြင်ဖို့ကြိုးစားနေပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်း ရှင်းပြပြီး ခေါင်းဆောင်မှုပေးတာကို လူထုက နာခံလိုက်ပါ။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော်တော်များများက မချင့်မရဲဖြစ်နေကြတာကို အောက်က ရွှေကျား ဆိုသူက ဒီလိုရေးတာလည်းတွေ့ပါတယ်။
“ရေမလာ မီးမမှန် လို့ လမ်းမပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြ လို့ တော့ နေ့ ချင်းညချင်း မီးတွေထိန် ပြီး ရေတွေ အလျံပယ်နေမယ်လို့လူထုတစ်တွေ မမျှော်လင့်ကြပါနဲ့ ၊ လူထုတွေ မီးကြောင့်ရေကြောင့် ဘယ်လောက်အချိန်ကုန်နေ၊ အလုပ်ပျက်နေ၊ စိတ်ဆင်းရဲ နေတယ်ဆို တာ ဒီလို ဆန္ဒပြ မှသာလျင် အစိုးရက သိသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ က ဒီဆင်းရဲမှုတွေကို ကောင်းစွာ နားလည်သဘောပေါက် ပြီး သား ပါ၊
(သားရွှေအိုးထမ်းတာမြင်လို တဲ့ မျက်မမြင်လို တစ်ချိန်တည်းအကုန် ဖြစ်လာရမယ် လို့မမျှော်လင့် ပါနဲ့ ၊)
တိုင်းပြည်ကြီးစုတ်ပြတ်လာတာ နှစ်ငါးဆယ်ကျော်ပြီ မို့ဦးသိန်းစိန်နဲ့ အစိုးရကို လက်ညိုးထိုး ပြီး အပြစ်ပုံချ၊ နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်၊ လုပ်ဖို့ ကတော့ ဒီအချိန်ဟာ အချိန်ကောင်းပါပဲ ။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေဟာ အောက်တန်းစား နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ လုပ်ကွက်သာဖြစ်ပါတယ်၊ ရေရှည်မှာ ကိုယ့်ဖက် ပြန်လှည့်လာမှာပါ၊
သတင်းမှာ ဖတ်လိုက်တယ်။ မီးမမှန်တာ ရေ မလာတာ စနစ်မကောင်းလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကဆို တယ်။ ဒီနေရာမှာ ဘယ်စနစ်က ဘယ်လိုဆို မီးမှန်ပြီး ရေလာမယ်ဆိုတာ နဲနဲ ပိုပြီး အသေးစိတ် ပြောဖို့လို ပါတယ်၊
ကောင်းပြီ၊ အခုအချိန်ကစပြီး မီးခိုး ရေခိုး အကြံအဖန်လုပ်တဲ့ ၀န်ကြီးတွေ။ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေ၊ လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ ပြည်သူတွေ လတ်ပေးလတ်ယူ ပြီးလုပ်နေကြတာတွေ ရပ်တန်းကရပ်ဖို့ လို ပါပြီ၊ ဥပဒေ အရ ပြတ်ပြတ်သားသား အရေးယူ ဖို့ အချိန်တန်နေပါပြီ၊ ဥပဒေကလည်း အားလုံးအပေါ် တစ်ပြေးညီ သက်ရောက်ဖို့ လို နေပါပြီ။ ”
နောက်တစ်ဦးကလည်း ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးပြန်ပါတယ်
“ကောင်းပါပြီ..အခုလို ပြည်သူလူထု လျှပ်စစ်မီးလုံလောက်အောင်မရတဲ့ အပေါ်မှာ မကျေနပ်ကြောင်း ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ အတွက် ဒီနေ.အထိရလာတဲ့ ရလဒ်တွေ က ရော ဘယ်လို ရှိသလဲ..။ အစိုးရ ရဲ.အဆင့်ဆင့်သော တာဝန်ရှိသူများ က မန္တလေး ထိသွားပြီး ပြည်သူလူထု ကိုရှင်းပြကြတယ်..၊ လက်ရှိအခြေအနေ ကို တင်ပြတယ်..။ နောက်နေ. သတင်းစာ မှာလည်း “ ပြည်သူလူထုသို. မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားခြင်း” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် နဲ. ရှင်းလင်း မေတ္တာရပ်ခံချက် ကို ထည့် ထားပါတယ်…။ လက်ရှိ လျှပ်စစ်ထုတ်ယူ နိုင်စွမ်းနဲ. ပေးဝေနေမှုအခြေအနေ ကို လဲ ရှင်းပြထားတာ တွေ.ရပါတယ်..။ ဒါဆိုရင်…ပြည်သူလူထု ရဲ.လျှပ်စစ်မီးမလုံလောက် တဲ့အပေါ် မှာ မကျေနပ် တာကို အစိုးရ အနေ နဲ. သိ တဲ့ သဘော ၊သိတဲ့အပေါ်မှာလဲ တတ်နိုင်သလောက် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ သဘော တွေ.ရပါတယ်..။ အဲဒီတော့ နောက်နေ.တွေ ဆက်ပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော် ဖို.လို သေးလို.လား…။ ကိုယ်သိစေချင် တဲ့သူ က ကိုယ်သိစေချင်တာ ကို သိသွား ပြီ ဆိုမှတော့ ဆက်ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော် ဖို. လိုပါ ဦးမလား…။ ကျနော့်အမြင်ပြောရရင်တော့ ဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်မှု ကို ဒီမှာတင်ရပ်သင့်ပါပြီ..။ မလိုလားအပ်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ရှုပ်ထွေးမှုတွေ ၀င်မလာခင် ရပ်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တချို.ဆွေးနွေး ဖို.လိုတဲ့ အချက်တွေ ကို ဆွေးနွေး လို. ရမယ့် လမ်းကြောင်းတွေ ရှာပြီး ဆက် ဆွေးနွေးပေါ့..။ ပညာရှင်တွေ ရဲ. ထင်မြင်သုံးသပ်ချက်တွေ ကိုလဲ နားထောင် ရပါလိမ့်မယ်။ လူထုလူအုပ် ရဲ. Inertia သဘောကို လည်း ထည့်တွက်သင့်ပါတယ်။
လိုရင်းပြောရရင်တော့……ဒီမိုကရေစီ ကို တကယ်ချစ်မြတ်နိုးတယ် ဆိုရင်ဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ကိုတလွဲမသုံး ဖို. လိုပါလိမ့်မယ် ။ ဒိမိုကရေစီ ခေတ်ကွ ဆိုပြီး ထစ်ကနဲ ရှိ ဆန္ဒပြမယ်…ဘာမကျေနပ်ဘူးလဲ သမ္မတ အထိ တက်တိုင်မယ်..တွေ ထင်တိုင်းလုပ်နေကြလို. ဖြစ်ပါ့မလား…စဉ်းစားကြပါ ခင်ဗျား…။ ”
ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီကိစ္စမှာ လူထုခေါင်းဆောင်က ဒီမိုကရေစီ နည်လမ်းကျစွာ လူထုကို စည်းကမ်းရှိရှိ ပြုမူတုံ့ပြန်ဖို့ စိတ်ဓါတ်မြှော်မြင်မှု မြင့်မားဖို့ လူရှေ့ထွက်လာပြီး ပြောမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
DVB သတင်းဌာနက တစ်ဦးကလည်း ဒီလို ထင်မြင်ချက်ပေးပါသေးတယ် “ချက်ခြင်းမရနှိုင်တာကို ဇွတ်တောင်းနေရင်လဲ ကျောက်ခဲရေညှစ်သလိုဖြစ်မယ်။ လိုတာထက်ပို လမ်းပေါ်ထွက်နေရင်လဲ လူထုအားကို တလွဲသုံးသလိုဖြစ်မယ်။”
သိတဲ့ ကလေးမလေး တစ်ယောက်ကတော့ ဒီကိစ္စကိုဖြင့် အားမပေးချင်ပါဘူးတဲ့။ အသက်ကြီးကြီး လူကြီးတစ်ယောက်ကတော့ အစိုးရက ပြောလိမ့်မယ် “မြန်မာတွေ ဒီမိုကရေစီနဲ့ မတန်ဘူးလို့” တဲ့။
ကဲ အားလုံးသော မန်းဂေဖတ်သူ ရေးသူများကော ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ၊ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ကိုယ်ရဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ကိုရော ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘယ်လို ပြုမူပြီး ဘယ်လို ဦးဆောင်စေချင်သလဲ။
ပွင့်လင်းစွာပြောနိုင်ပါသည်။ လူထုခေါင်းဆောင်ကို ဝေဖန်ပိုင်ခွင့် ရှိ၏ မရှိ၏ တော့ သေချာမသိပါ။ တော်ကြာ ဘုန်းကြီးခေါင်းသွားခေါက်မိသလိုဖြစ်နေမှာစိုးလို့ ကြိပြီး ဆောဒီး နော်။
တူညားတွေ ဘယ်လိုပြောမလဲ ကြည့်ပြီးမှ တစ်ခေါက်ပြန်လာမယ်နော်…
ဒီ အချိန်မှာ လိုအပ်နေတဲ့ ပို့စ် ပါ
ဖယောင်းတိုင်ထွန်းတာ အားပေးပါတယ် ဒါပေမဲ့ အခုလောက်ဆို လုံလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်
ပို့စ် ထဲမှာ ပါသလို လွှတ်တော်ထဲက ထိန်းကျောင်းတာမျိုး
အရင်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဘယ်လက်က ပိုက်လိုင်းဆွဲ ညာလက်က အရည်အသွေးထိန်းတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေ ထပ်မဖြစ်အောင် မီဒီယာနဲ့ တာဝန်ရှိသူများလုပ်ရပါမယ်
လူထု နှလုံးသားထက် ဥဏှောက်ကို ဦးစားပေးရပါမယ်
စသင့်တဲ့ အချိန်စပြီး ရပ်သင့်တဲ့ အချိန်ရပ်ရပါမယ်
ရှေ့ကိုဆက်လျှောက်နိုင်ဘို့ တွန်းအားပေးတာမျိုးပဲ ဖြစ်သင့်ပြီး ၊ကိုယ့်တွန်းအားတွေက နောက်ပြန်လည်သွားစေနိုင်တာမျိုး မဖြစ်သင့်ပါ
နောက် ဒီ ပို့စ် နဲ့ သိပ် မဆိုင်ပေမဲ့ အခုချိန် ဖြစ်နေတာလေးက
ခေတ်မီသူတိုင်း သမ္မတကို တိုင်ကြသည်ဆိုတာမျိုး ဖြစ်နေတာလဲ အဓိပ္ပါယ်တော့ မရှိပါဘူး
ဖဲကြွေးမရလဲ တိုင်မယ်၊ ဆိုက္ကားခ မရှိလဲ တိုင်မယ် ကွန်းမန့်ပေးမရလဲ တိုင်မယ် ဆိုတာမျိုး ထစ်ကနဲရှိ သမ္မတကို တိုင်မယ်ဆိုတာလဲ မှန်ကန်တဲ့ ပြသာနာ ဖြေရှင်းနည်း မဟုတ်ပါ
သူများယောင်ရင် လိုက်ယောင်မယ်..သူများဟေးရင် လိုက်ဟေးမယ်..ဒါပဲ သိကြတာကိုးဗျား..
မလောက်ပါဘူးဆို ဖယောင်းတိုင်လျှောက်ထွန်းတော့ ဖယောင်းချက်စက်ရုံ သထေးဖြစ်တာပဲ အဖတ်တင်မပေါ့..
ဒီကိစ္စက နဂိုထဲက သိပြီးသား.အဲတာ ဖယောင်းတိုင် ထပ်ထွန်းနေစရာမလိုတော့ပါဘူး
ကင်းမြီးကောက်ထောင် ဆန္ဒပြလဲ လတ်တလော မီးကတော့ မှန်မှာ မဟုတ်သေးပါဘူး..
အက်ဒီဆင် အဖေခေါ်ရလောက်အောင် စဉ်းစားကြစမ်းဘာဗျာ
ခဏနေ မီးပျက်တော့မှာမို့ ..တတ်တာ..ဘိုင့်လဘိုင်..လစ်ဘီဗျား..
လူထုအားကိုသုံးပြတာလဲ တမျိုးတော့ကောင်းပါတယ်… နောက်ဆို တခုလုပ်တော့မယ်
ဆိုရင် သူတို့( ဘယ်သူတို့မှန်းတော့မသိ) ဟာကွက်မရှိအောင် စဉ်းစားပြီးလုပ်လိမ့်မယ်
လို့ တွေးမိတယ်…. ဟုတ်မယ် မဟုတ်တော့ မသိဘူးနော်..
လျှပ်စစ်မီးခဏခဏ ပျက်တဲ့ ကိစ္စကိုလဲ အခုဆိုရင် သူတို့ ခေါင်းကိုက်နေကြမှာပါ….။
အခက်အခဲကို မသိသေးဘူး ထင်ရင် သိအောင်ပြပေးရမယ်။
ဒါပေမယ့်ကိုပြတိုင်းချက်ခြင်းတော့ ဖြစ်မလာဘူးဆိုတာလဲကြိုတင်တော့ လက်ခံထားရမယ်။
ကျနော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ တစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် သေချာစဉ်းစားပြီးမှ
ကျွန်မ ကိုလင်းဝေ ကို လုံးဝ ထောက်ခံပါတယ်။
ကျွန်မ အနေနဲ့ ကတော့ စွမ်းအင်ရေးရာပိုင်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတမှာ မှာ သုံည ဘဝ မို့ မီးလာအောင် ဘယ်လို ဖြေရှင်း ကြမယ် ဆိုတာကို တော့ ဝင် မဆွေးနွေးသင့်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အခုကိစ္စမှာ အုပ်ချုပ်မှုပိုင်း ဆိုင်ရာ ရှုဒေါင့်ကနေ ကြည့်ပြီး ပြောချင်ပါတယ်။
လောလောဆယ် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း လေး နဲ့ ဖြေရှင်းလို့ ရတဲ့ အရာကို ဘာလို့ နှောင့်နှေး နေကြသလဲ မစဉ်းစားချင်ပါ။
လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးများ လို့ အမည်ခံထား သော “စွမ်းအင်ရေးရာပိုင်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ” နဲကာ ထိုနေရာတွင် ဘာမှ သုံးစား မရသော သူများကို ရာထူးမှ ဖယ်ရှား လိုက်ရုံပါဘဲ။
ထိုဖယ်ရှားလိုက်သော နေရာများမှာ အမှန်တကယ် နားလည် တတ်ကျွမ်း သူများ ဖြင့် အစားထိုးလိုက်ပါ။
မြန်မာပြည်မှာ စွမ်းအင်ရေးရာပိုင်း တတ်ကျွမ်းသူ ပညာရှင် များ မရှားပါ။
အဲလိုမျိုး လုပ်မှ ၂ဦး ၂ဖက် နားလည် ပေးနိုင်သော အခြေအနေ ရပါမည်။
ဖယောင်းတိုင် ထွန်းတာ ကို အကြောင်းပြပြီး ကြားကနေ ဝင်လာမဲ့ အန္တရာယ် တွေ အများကြီး ဆိုတာကို သတိထားကြပါ။
မဟုတ်ရင်တော့ ” မြွေပါလဲဆုံး။ သားလဲဆုံး” ကောင်းစပြု နေသော အခြေအနေ ပျက်စီး သွားမှာ စိုးရပါတယ်။
ဒီတော့ ပြည်သူတွေ ဘက်ကလဲ ကိုယ့်ဆန္ဒ ဖော်ထုတ် ပြီးပါပြီ။
ဒီအချိန်မှာ ခဏ ရပ်ပြီး အခြေအနေ စောင့်ကြည့်ပါ။
ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင် များ ကတော့ သက်ဆိုင်ရာမှ တစ်ဆင့် အဆက်မပြတ် ညှိနှိုင်းသင့်ပါသည်။
ပြည်သူများအနေနဲ့ အစိုးရ နဲ့ မိမိတို့ နှစ်ဖက်ထဲ ရှိတယ်လို့ မတွေးကြပါနဲ့။
ကြားမှ အဖျက်ရန်များ တစ်စု မက ရှိသည်ကို သဘောပေါက်ထားကြပါ။
ပို့စ် နဲ့ သိပ်တော့မဆိုင်ဘူး ..အရီးရေ..လျှပ်စစ်ဖြန့်ဝေရေး ဘာညာနဲ့
ပတ်သက်လို့ ဗဟုသုတရစရာဆိုရင် အင်္ဂလိပ် စာရေးဆရာ
အာသာဟေလီ ရဲ့ Overload ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုလေး ဖတ်ကြည့်ပါလားခင်ဗျ။
၁၉၇၉ မှာထုတ်တဲ့ စာအုပ်ပါ။ ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ လျှပ်စစ်ပြဿနာ
အကြပ်အတည်း ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းကို Golden State Power and Lightရဲ့
ဒုဥက္ကဌ Mr. Nimrod Goldman နေရာကနေ ရေးထားတာပါ။
ဝတ္ထုထဲက ကုမ္ပဏီက စိတ်ကူးယဉ် ဆိုပေမဲ့ အပြင်မှာ တကယ်ရှိတဲ့
ဓာတ်အားပေးကုမ္ပဏီ တစ်ခုကို အသေအချာ လေ့လာပြီး ရေးထား
တာ။ သူ့ဝတ္ထုထဲက ကုမ္ပဏီနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးကို ခြေရာခံကြည့်တော့
Pacific Gas and Electric Company လို့ ဆိုကြတာပဲ။
ဝတ္ထုဆိုတော့ ဖတ်ရတာလည်း မငြီး၊ ဗဟုသုတလည်း ရပေါ့။
(စာရေးဆရာ မောင်မြင့်ကြွယ်က မတန်တဆ ဆိုပြီး ဘာသာပြန်ထားပါတယ်)
ကျေးဇူးပါဘဲ ကိုဘလှိုင် ရှင့်။
ဒီလို အချင်းချင်း မျှဝေ မှုလေးတွေ ကြောင့် ဒီဂေဇက် က တန်ဖိုးရှိတာ ဆိုရမယ်။
ကျွန်မ ကြိုးစားပြီး ရှာဖတ်လိုက်ပါမယ်။
အခုတင်သတင်းကရတယ် .. ဒီနေ့လဲ ဆက်လုပ်နေကြပီ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပိုမိုရရှိရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော် ကြသူများသည် ဆူးလေ ခုံးကျော်တံတားပေါ်မှ ဆင်း၍ ဆူးလေ ဘုရားလမ်း (မီးသတ်ဌာနရှိရာဘက်အခြမ်း) အတိုင်း ဆူးလေဘုရားဆီသို့ ဦးတည် သွားနေကြောင်း၊ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူ ဦးရေမှာ တစ်ရာနီးပါးခန့် ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း The Voice Weekly သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
ဒီနေ့ ညနေ ၇နာရီခန့် အချိန်မှာ မန်းတလေးမြို့ ၂၂လမ်းအနောက်ဘက်ထဲမှာ မီးလန့် မှု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင် ။
ကိုလင်းမြွေ အား အပြည့်အဝ အားပေး ပါ၏ ။ with plus 1 !
အင်းး တခါတလေတော့လဲ. စဉ်းစားမိတာက
ကျနော်တို့ လို နယ်မြို့ လေးတွေ၊ကျေးရွာလေးတွေလို၊
နေ့ အလင်းရောင်လေးနဲ့ ဘဲနေ၊မီးက်ကလေးနဲ့ (၃)နာရီ
လောက်ရွာမှာမီးထွန်း၊ရေတွင်း ရေကန်က အိမ်ဘေးနားတင်
ဆိုတော့ မြို့ ထက်တော့ အနေအေးသပေါ့။
အော်. မြို့ ပြဒုက္ခလို့ တွေးမိပါရဲ.့ ။
သိလောက်ပြီဆိုရင်လည်း ထပ်နားပူမနေပဲ ဘာလုပ်ပေးမလဲ စောင့်ကြည့်ကြပါ။
(၂)တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးတဲ့ ပြည်သူတွေကိုတောင်းပန်တာ တိုးတက်လာတာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် တောင်းပန်တာမှာ ရပ်မနေပဲ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမယ်၊ခန့်မှန်းဘယ်ကာလလောက်မှာ ပြန်ကောင်းနိုင်မယ် ဆိုတာ လူထုကို အသိပေးသင့်ပါတယ်။
(၃)လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတာ ဘုရားမဟုတ်တော့ အရာရာ မသိမကျွမ်းကျင်နိုင်ပါဘူး။
သူ့မှာရှိတာ မျှတအောင် တွေးခေါ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းပါ။
ကိုယ်မကျွမ်းကျင် လုပ်ပိုင်ခွင့်လည်း မရှိသေးတဲ့ ကာလမှာ တာဝန်အတင်းမယူခိုင်းပါနဲ့အုံး။
လူထုက အစိုးရကို ပြည်သူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို တင်ပြခွင့်၊တောင်ဆိုခွင့်ရှိပါတယ်၊(ဒါပေမယ့်…နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေကိုတော့ သတိထားသင့်ပါတယ်။) လမ်းပေါ်တွက်တိုင်းကောင်းတယ်လို့တော့မမြင်ပါ၊သာဓကတွေအများကြီးရှိပါတယ်၊အသက်(၃၅)၀န်းကျင်ထိ သေသေချာချာမသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်၊။မျက်ဖြူစိုက်လေ ဆရာကြိုက်လေဖြစ်သွာဒမှာကိုလည်း နိုင်ငံရေးလှုပ်လျှားသူမျာဒသတိထားရမည့်အချက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်၊ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားသွားတဲ့အထဲမှာ ဘယ်ကိစ္စဘဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းအရာကို သေသေချာချာစဉ်းစားသင့်တယ်၊ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရသလဲဆိုတာ စနစ်ကြေင့်လို့ထောက်ပြပါတယ်၊ စနစ်တစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ကူးပြောင်းရာမှာလည်း ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမူတွေမပါဘဲနဲ့ ထင်ရာမြင်လျှောက်လုပ်လို့မရပါဘူး…။အဲဒီတော့…အချိန်အနဲငယ်တော့ပေးရမယ်…ပြည်သူတွေကစောင့်ကြည့်မယ်…မှားရင်ထောက်ပြဝေဖန်ရဲရမယ်…
ကိုလင်းဝေရဲ့ ပိုစ့်ကို လေးစားစွာနဲ့ထောက်ခံပါတယ်…။
ကိုလင်းဝေ ထောက်ပြ ဝေဖန်သွားတဲ့ အချက်တွေက တကယ့်ကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့
ပို့စ်တစ်ပုဒ်လို့ ခံစားမိပါတယ်ဗျာ။ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည် စုတ်ပြတ်သတ်နေတာ ကြာခဲ့ပါပြီ။
ဒါကို အစိုးရက လုံးဝနားလည်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပြည်သူများ ဘက်ကလည်း အင်မတန်မှ
ကိုရင်လင်းဝေရေ… တန်ဆေး လွန်ဘေးဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ကျနော်တို့ ပြည်သူဘက်ကလည်း
လက်ရှိအစိုးအရ ဖိအားမပေးပဲ (သူရဲကောင်း မျှော်ကိုးတဲ့ စိတ်ကို ချင့်ချိန်ပြီး) တန်ရုံလောက်ပဲ ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်ကြရင် နှစ်ဘက်စလုံး
မထိခိုက်ပဲ ကျနော်တို့ ရောက်ချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကို တစ်နေ့တော့ ရောက်လာတော့မယ်
ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ… ကိုရင်လင်းဝေပို့စ်အား အထူးထောက်ခံအားပေးသွားပါတယ်…
အသင်ပြောသောစကားများကို coated လုပ်ထားပါတယ်။
“သတင်းမှာ ဖတ်လိုက်တယ်။ မီးမမှန်တာ ရေ မလာတာ စနစ်မကောင်းလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကဆို တယ်။ ဒီနေရာမှာ ဘယ်စနစ်က ဘယ်လိုဆို မီးမှန်ပြီး ရေလာမယ်ဆိုတာ နဲနဲ ပိုပြီး အသေးစိတ် ပြောဖို့လို ပါတယ်”
ဖြေ။ အမေစု ပြောတဲ့ စနစ် ဆိုတာ..စိမံခံခွဲမှု့ စနစ် နေမှာပါ. ငါ့တိုင်းပြည် အတွက်..ဂက်စ်တွေရောင်းနေမယ့်
အစား..အဲဒီဂက်စ်တွေကို.. လျှပ်စစ်မီး အဖြစ်ဖြစ်ဂက်စ်မှတဆင့် ဖန်တီးပေးဖိုလိုမျိူ့းပေါ့..ဥပမာ..လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးက မီးတွေပိုနေလို့ရောင်းစားနေ့တယ်တဲ့…မန်းလေးက လျပ်စစ်
အင်္ဂျံင်နီယာတစ်ယောက်ကတော့…မိုးနတ်မင်း ကယ်ပြီး မိုးရမှ မီးရမှာ မျိူးတို့..၀န်းကြီးက ပို တယ်လို့
ပြောပြီး..လက်အောက် တိုင်းအင်္ဂျင်နီယာက ဖြေပုံက လို တယ်တဲ့. အဲဒါ စနစ်မကောင်းခြင်း ရဲ့ အကြောင်းတစ်ခုပါပဲ။ အထက် က ကြွား အောက် က မှား နေ တာ တွေလေ..အမေ စု က စနစ်မကောင်းဘူး
လို့ ပြော ရင် လုံလောက်ပါပြီ။။။
ဖြေ။ လူထုက ရေမလာ မီးမမှန် လို့ လမ်းမပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြ လို့ တော့ နေ့ ချင်းညချင်း မီးတွေထိန် ပြီး ရေတွေ အလျံပယ်နေမယ်လို့လူထု ကမျှော် လင့် လောက်အောင်မအပါဘူး။ ဆန္ဒပြ ခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ဟာ မသိ လို သော်လည်းကောင်း..
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ က ဒီဆင်းရဲမှုတွေကို ကောင်းစွာ နားလည်သဘောပေါက် ပြီး သား ပါ ဆိုရင် ပြည်သူတွေ မီး လျှပ်စစ်မီး
အပြုသဘောဆောင်ပြီး ပို့စ်ရေးတင်တဲ့ ကိုလင်းဝေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကွန်မင့်တွေနဲ့ ၀င်ဆွေးနွေးသူတွေလည်း အမြင်မတူတာလေးတွေ သိရတာပေါ့
ပြည်သူတွေကလည်း သူတို့ခံစားနေရတာကို (ငြိမ်းချမ်းစွာ) စုဝေးဆန္ဒဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ကြတယ် ဆိုတာ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ ၀ိသေသမဟုတ်ပါလား..
ဝေါစထရိကို သိမ်းပိုက်ကြ ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့.. ဟဲ ဟဲ။ တိရိစ္ဆာန်အခွင့်အရေးအတွက်တောင် လမ်းပေါ်ကိုယ်လုံးတည်းနဲ့ ဆန္ဒပြနေကြတာဗျ သူများနိုင်ငံတွေမှာ..။ ခုဟာက ကျုပ်တို့ပြည်သူတွေ နှစ်ရှည်လများခံစားခဲ့ရတဲ့ ဒုက္ခကို ခုမှ (ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း) ထုတ်ပြောခွင့် ရကြတာပါ..။
နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်မယ့် လူတွေဘေးက မီးထိုးမှာကိုတော့ သတိချပ်ကြရမှာပေါ့လေ..။
ပြည်သူတွေ လိုချင်တာ နေ့ချင်းညချင်း မီးလင်းဖို့မဟုတ်ပါ..။
သတင်းစာက ဓာတ်လိုက်ပြီး ပိုလို့ နိုင်ငံခြားကိုရောင်းစားနေရတယ်ပြောတဲ့ လျှပ်စစ်မီးတွေ ဘယ်မလဲ? .. ပြည်သူအများ ဒုက္ခကို ဘယ်သူက တာဝန်ယူ ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးမလဲ ဆိုတဲ့ အဖြေပါ..
ကိုဆန်နီ ရေ….အရမ်းကောင်းတဲ့ ကွန်မန့်လေးပဲဗျ..။ မဆီမဆိုင် ဗျာ…. ကျုပ်က တော့ မီးရရမရရ …ပြမှာပဲ
ကို R GA ရေ..
ဆန္ဒပြတယ် ဆိုတာ ငယ်ငယ်ကလိုပေါ့
ငိုတတ်တဲ့ ကလေး အမေ့နို့ အရင်စို့ ရတာပဲလေ။
ဒါပေမဲ့ စည်းကမ်း ကို သိဖို့တော့လိုတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ မှာ အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းတွေ၊ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေကို
ဦးဆောင်သူ အားလုံးလိုလို ဟာ နောင်တက်လာမဲ့ အရည်အချင်းရှိတဲ့သူတွေဆို အုပ်စုဖွဲ့ပြီးဝိုင်းသမတယ်။
အဓိက က သူတို့ စားပေါက်ပိတ်သွားမှာစိုးလို့ ပဲ။
ဒီလိုနေရာရလာတာဟာ အရည်အချင်းရှိလို့ မဟုတ်ပဲ ဖါးပြီး ငွေနဲ့ ဝယ်ယူထားကြတာများတယ်။
ပါးစပ်ကနေ သန့် ရှင်းအောင်လုပ်မယ်လို့ ပြောလို့သန့် လာမှာဟုတ်ဘူး၊
လှဲ ဖို့တံဗျက်စည်းလိုတယ်။ဒါမှ သန့် မှာ။
ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူတွေဟာ ဒီစနစ် နောက်မလိုက်ဖို့ လိုတယ်။
ဒီစနစ်မှာ ရှိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူတွေကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပယ်ရှားရဲရမယ်။
ဒါမှ ခေါင်းဆောင်ကောင်းဆိုတာ ပေါ်လာမယ်။
အပြုသဘောဆောင်သော ဝေဖန်ရေးကိုတော့ ဘယ်ဖက်ကပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကြိုဆိုရမယ် ထင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဒီမိုကရေစီနဲ့ မတန်ဘူး ပြောတာကိုတော့ မကန့်ကွက်ချင်ပါဘူး။
ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီမိုကရေစီရဲ့ လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို သေသေချာချာ ဂဃနဏ မသိသလို၊ ပြည်သူအများစုလည်း သိမယ် မထင်ပါ။
ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ပြည်သူလူထုကြားမှာ အသိအမြင်တွေ တိုးပွားလာအောင်၊ လိုက်နာအောင် မနည်း ကြိုးစားယူရဦးမယ် ထင်ပါတယ်။
ပြောခွင့်ရပြီဆိုတာနဲ့ ဖြစ်ချင်တာတွေကို ဖြစ်သင့် မဖြစ်သင့်၊ ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင် မစဉ်းစားပဲ ထစ်ကနဲရှိ ဆန္ဒပြမယ်ဆိုတာတွေ၊ သမ္မတကြီးဆီချည်းပဲ တိုင်တန်းနေတာတွေလည်း မလုပ်သင့်ဘူးထင်ပါတယ်။
လူတိုင်းအနေနဲ့ မီးပုံမှန်လာစေချင်တာ၊ ၂၄ နာရီမီးလာစေချင်တာ က တော့ ပြောစရာမလိုပါ။
ကိုယ်တိုင်ကြုံနေရတာကတော့ မီးမလာတဲ့အတွက် အိမ်မှာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေ ပျက်လို့ ပြင်သင့်တာပြင်၊ အသစ်ဝယ်လဲတန်တာ လဲနေရပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်း မီးစက်ကို အသုံးပြုနေရလို့ တစ်နာရီ ဒီဇယ် ၂ဂါလံ ၃ဂါလံ နဲ့ အတော့်ကို ဒုက္ခရောက်ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပြည်သူတွေ ဘက်ကလည်း သိစေချင်တာကို သိစေပြီးရင် တော်လောက်ပါပြီ။
အတင်းအကျပ် ချက်ခြင်းလက်ငင်း မရမနေ အကျပ်မကိုင်သင့်ပါဘူး။
ဖြစ်သင့်တာကို နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များ၊ လူထုခေါင်းဆောင်များဘက်ကလည်း ပြည်သူလူထုအတွက် စိတ်ထား ဖြူဖြူဖြောင့်ဖြောင့်ဖြာင့်ဖြင့် ၀ိုင်းဝန်း ကြိုးစားပေးကြစေလိုပါတယ်။
ဒေါ်စု ဝင်ရမဲ့ အခြေအနေ မဟုတ်သေးဘူး.. ၈၈အဖွဲ့များ၊ တက်ကြွတဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်များရဲ့ ပွဲဖြစ်တယ်။ လွှတ်တော်တွင်း နိုင်ငံရေးပုံစံ ပီပီပြင်ပြင် မရှိသ၍ လမ်းပေါ်ဆန္ဒမှုများ ရှိနေအုံးမှာပဲ၊ တားမရပါ။ မြန်မာပြည်မှ မဟုတ်ဘူး နိုင်ငံတဂါမှာ ဒီလိုပဲဖြစ်တယ်။ အမေရိကန်နဲ့ အနောက်နိုင်ငံများမှာလည်း လွှတ်တော်အတွင်းမှာ သူတို့အသံများကို မျက်ကွယ်ပြုထားတယ်လို့ လစ်ဘရယ်အဖွဲ့များ ထင်တဲ့အခါ လမ်းပေါ်စုဝေတောင်းဆို ဆန္ဒပြဖော်ထုတ်မှုများ ဖြစ်တာပဲ။ တလောဂဖြစ်ခဲ့ဒဲ့ Occupy movement များသည် အထင်ရှားဆုံး သာဓကပဲ။
ခရိုနီ စီးပွားရေးသမား၊ ဂွင်မိနေဒဲ့ သူဌေးလုပ်ငန်းရှင်၊ လခကောင်းကောင်းစားနေဒဲ့ လက်တဆုပ်စာ ဝံထမ်းတွေဂဒေါ့ ဆူဆူပူပူ ဖြစ်ချင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်တို့လည်း သူတို့နေရာဆို အဲသလိုပဲ တွေးမှာပဲ။ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးဖြစ်တော့ ဂွင်မိနေဒဲ့ ဘီလျံ ထရီလျံချီလုပ်နေဒဲ့ ဒီမိုကရက်တစ် အမြင်ရှိဒဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်အချို့ဂ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား မဖြစ်စေလိုဂျောင်း ညီးဒယ်။ ဒါလည်းရှင်းတယ် တရက်စီးပွားရေး မလုပ်ရရင် သိန်းထောင်သောင်းချီ နာဒါဂိုး..။ သူတို့တောင် အဲသလိုမျိုးဆိုရင် ခရိုနီစီးပွားရေးသမားဒွေ ဘယ်လိုတွေးဂျမလဲ….။
အင်း ဘာမှတော့ မပြောတော့ပါဘူး။ ပြောတဲ့သူတွေ များနေတော့လည်း ကဲ လျှပ်စစ်မှန်မှန် မပေးတော့မှာ သေချာပြီလား ဒါဆိုရင်တော့ ဖယောင်းတိုင်စက်ရုံ တည်ထောင်တော့မယ်…
ဟိုက ပွက် ဒီကပွက်နဲ့……..
မြန်မာပြည်လျပ်စစ် မီး မလုံလောက်တာ စနစ်ကြောင့် လို့ဒေါ်စု ပြောတာကို ခြွင်းချက်မရှိ ထောက်ခံပါတယ်။ ပြောရရင် စီမံခန့်ခွဲ မှု ညံဖျင်း တာပေါ့၊ နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေး အတွက် အခြေခံ အကျဆုံး လျှပ်စစ် ကို ပြည်တွင်းသုံးစွဲမှု မဖူလုံပဲ၊ ပြည်ပ ပို့ပစ်တာ က ပြည်သူတွေအတွက် အခံပြင်းဆုံး ဖြစ်ရပ်ပါ။ လူတစုအတွက်ကတော့ တိုင်းပြည် တိုးတတ် လာလို့ နောက်မှ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် အသီးအပွင့် ထက်စာရင် သူတို့ အတွက် လက်ငင်း ရလာတဲ့ အခွင့် ရေးကို ကောက်ကိုင် သွားခဲ့ကြတာပါပဲ။
နောက်တချက် က အလုံအလောက် မရတဲ့ ဓါတ်အားကို ခွဲဝေမှု မညီမျှတာပါပဲ။ နေပြည်တော်ရဲ့ လူမရှိတဲ့ လမ်းတွေပေါ် ထိန်ထိန် ညီးနေတာ၊ မီးအားများလို့ လျှပ်စစ် ပစ္စည်းတွေ မကြာခဏ ပျက် တတ်တာ ၊ နေပြည်တော်မှာ ၀န်ထမ်း ၃နှစ်လုပ်ခဲ့ ဖူးတဲ့ ကျမ အသိဆုံးပါ။
အဆိုး ဆုံးက ဗွီအိုင်ပီ လို့ခေါ်တဲ့ ဘယ်သူရဲ့ သားသမီး ၊ မြေးတွေ ဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာမှာ ရှိမှာ မို့လို့ မီးမဖြတ်ရ ဆိုပြီး အလှည့်ကျပေးရမယ့် နေရာကိုဖြတ်ပြီး သူတို့ ရှိမယ့်နေရာကို မဖြစ်မနေပေးရတယ်။ ဒါကို ပို့စ်ထဲမှာပါတဲ့LCD ဆိုတဲ့ ဌာနက လုပ်ပေးရတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီ ဌာနက ၀န်ထမ်းတွေ ဟာ ကိုယ့် သဘောနဲ့ ကိုယ် ဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ဌာနမှုးက ၀န်ကြီး အလို အတိုင်း ဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။ ပြောရရင် ဖုန်းကိုင်တဲ့ တာဝန်ကျ ၀န်ထမ်းတွေဟာ လူမုန်းခံရသလောက် ဘာမှလည်း လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိပါဘူး။ မြို့နယ်ရုံးက မီတာစာရေးလောက်တောင် လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိပါဘူး။ အဲဒီ ၀န်ထမ်း ၂မျိုးလုံးရဲ့ အကြောင်း ထဲထဲဝင်ဝင် သိတဲ့ အတွက် နောက်မှသက်သက် ရေးပြပါမယ်။ မီတာစာရေးနဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ ၊ မီးအသုံးများတဲ့ အိမ်တွေ ပေါင်းပြီး ယူနစ် ခိုးတာတွေ ကလည်း ထိထိရောက် ရောက် အရေးယူရမယ့် အဖြစ်တွေပါ။
လိုရင်းပြန်ပြောရရင် စီမံခန့်ခွဲမှုကြောင့်၊ စနစ်ကြောင့်ပါပဲ။
ဒါကြောင့် ပြည်သူရဲ့ ဆန္ဒ ကို ထုတ်ဖေါ်တာ မှန်ပါတယ်။ အစိုးရဘက် ကအသိမှတ် ပြုပြီး အရင် အစိုးရတွေလက်ထက် က ဘယ်တုန်းကမှ မလုပ်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူကို တောင်းပန်တာတွေက ကောင်းမွန်တဲ့အပြောင်းလဲတွေပါ။
ဒါကိုပြည်သူတွေဘက်ကလည်း အသိမှတ်ပြုပေးဖို့ လိုတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲတွေကြောင့် နောက်ကြောင်းပြန်လှည့် သွားမှာတော့ စိုးရိမ်မိပါတယ်။
မြန်မာပြည်လျပ်စစ်မီးမလုံလောက်တာ စနစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထောက်ခံပါတယ် ။ အခုဆိုရင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေကြောင့် အစိုးရက သတင်းတွေမှာ တရားဝင်တောင်းပန်တာတွေပါလာပြီ။ အစိုးရအနေနဲ့ မသိချင်ယောင်ဆောင်တာ ၊ ပြည်သူဒုက္ခရောက်တာ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေတာတွေ လုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာသူတို့နားလည်လာပြီ ။ပြည်သူ့အသံကိုသူတို့ နားထောင်၇ကောင်းမှန်း အလေးအနက်ထားရကောင်းမှန်း သိလာပြီ ။ အရင်အစိုးရကြောင့်အခုလိုဖြစ်နေတာပါဆိုရင် အခုအစိုးရအဖွဲ့ကလူတွေကရော ဘယ်ကနေလာတဲ့သူတွေလဲ ။
“လျှပ်စစ်မီး မရရှိမှုကြောင့် ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒ ပြမှုများကို သဘောကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ဆန္ဒပြသူတွေက လျှပ်စစ်မီး ကို အရင်ပေးပါ ဒီမိုကရေစီကို နောက်မှ ပေးပါလို့ ပြောဆိုတာတွေက ကျမ စိတ်ထဲမှာ ဘ၀င်မကျပါဘူး။ လျှပ်စစ်မီးတွေ မှန်မှန် မရတာဟာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ အားလုံးကိုသေသေချာချာ စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်”
ခင်ဗျားပြောချင်တဲ့ ဆိုလိုရင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တိတိကျကျကြီးကို
အမေစု နဲ့ ပတ်သက်သမျှ အပြစ်ပြောရဲ ပြောကြည့် ၀ိုင်းဆဲမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကြားမှာ
ဘယ်လို ရပ်တည်ရေးသားရမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်တို့ မျှောလိုက်နေမိကြသလားလို့ တစ်ခါတစ်ခါ တွေးမိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့လည်း အမေစုကို ချစ်ကြတဲ့လူတွေပါပဲဗျာ။
အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများ က မန္တလေး ထိသွားပြီး ပြည်သူလူထု ကိုရှင်းပြကြတယ်..၊
လက်ရှိအခြေအနေ ကို တင်ပြတယ်..။
နောက်နေ. သတင်းစာ မှာလည်း “ ပြည်သူလူထုသို. မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားခြင်း” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် နဲ. ရှင်းလင်း မေတ္တာရပ်ခံချက် ကို ထည့် ထားပါတယ်…။
လက်ရှိ လျှပ်စစ်ထုတ်ယူ နိုင်စွမ်းနဲ. ပေးဝေနေမှုအခြေအနေ ကို လဲ ရှင်းပြထားတာ တွေ.ရပါတယ်..။
အစိုးရ အနေ နဲ. သိ တဲ့ သဘော ၊ သိတဲ့အပေါ်မှာလဲ
တတ်နိုင်သလောက် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ သဘော တွေ.ရပါတယ်..။
ကျနော့်အမြင်ပြောရရင်တော့ ဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်မှု ကို ဒီမှာတင်ရပ်သင့်ပါပြီ..။
pyae hein kyaw says:
အကိုရေညီက EPC ကလည်းမဟုတ်သလို ဘယ်ပါတီမှမပါတဲ့ပြည်သူစစ်ပါအကို။အကိုတို့ တစ်နေ့လုံးအလုပ်လုပြီးရင်နားလားအကို။တစ်နေ့လုံးတစ်ညလုံးမနားပဲအလုပ်လုပ်ကြည့်ပါ့လားအကို
(အလုပ်လုပ်ပြီးရင် နားလားအကို)ယူနီကုတ် ဖြစ်နေလို့စာကျန်သွားလို့အကို